TikTok मा थप भ्यू कसरी प्राप्त गर्ने - Victor Mochere
by स्टीफन Mitrovic
यदि तपाइँ हामी जस्तै केहि हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सायद TikTok को लागी पागल हुनुहुन्छ। छोटो-फार्म भिडियो-साझेदारी एपले इन्टरनेटलाई तूफानमा लिएको छ, लाखौं मानिसहरूले यसलाई 15-सेकेन्डको भिडियोहरू सिर्जना गर्न र साझेदारी गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। र यदि तपाइँ तपाइँको TikTok खेल को लागी हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सोचिरहनु भएको हुन सक्छ कि तपाइँको भिडियोहरूमा धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरू छन्। खैर, अब अचम्म छैन। TikTok मा थप हेराइहरू प्राप्त गर्ने केही फरक तरिकाहरू छन्, र हामी तपाईंलाई स्कूप दिन यहाँ छौं।
TikTok दृश्य ह्याक
तपाईंले TikTok 1000 भ्यू कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
मैले TikTok ह्याकमा थप भ्यु कसरी प्राप्त गर्ने?
फलोअर बिना TikTok मा भ्युज कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ?
किन मैले TikTok मा भ्युहरू पाइरहेको छैन?
TikTok मा धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्ने कुनै गोप्य कुरा छैन - तपाईंले जति धेरै सामग्री उत्पादन गर्नुहुन्छ, सम्भावित दर्शकहरूले तपाईंलाई त्यति नै देख्नुहुनेछ। तर तपाईंले ती सबै-महत्वपूर्ण दृश्यहरू हेर्ने र प्राप्त गर्ने सम्भावनाहरू बढाउन केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
1. सार्वजनिक रूपमा आफ्नो खाता सेट गर्नुहोस्
यो एक नो-ब्रेनर जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि कति मानिसहरूले आफ्नो खाताहरू यो महसुस नगरी निजीमा सेट गरेका छन्। यदि तपाईंको खाता निजी छ भने, तपाईंलाई फलो गर्ने मानिसहरूले मात्र तपाईंको सामग्री हेर्न सक्षम हुनेछन्।
२. उच्च गुणस्तरका भिडियोहरू बनाउनुहोस्
मानिसहरूले राम्रो देखिने र आकर्षक हुने भिडियो हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कोही पनि बोरिङ भिडियो हेर्न चाहँदैनन्, त्यसैले आफ्नो फरक बनाउन केही प्रयास गर्नुहोस्।
3. लोकप्रिय संगीत प्रयोग गर्नुहोस्
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि संगीत TikTok को एक विशाल भाग हो। चाहे तपाईं लिप-सिंक गर्दै हुनुहुन्छ, नाच्दै हुनुहुन्छ, वा साथीहरूसँग ह्याङ्ग आउट गर्दै हुनुहुन्छ, पृष्ठभूमिमा एउटा गीत बजिरहेको छ। र जब तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि कुनै पनि संगीतले गर्नेछ, लोकप्रिय गीतहरू प्रयोग गरेर तपाइँको TikToks मा धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। किन? खैर, एक को लागी, मानिसहरू संगीत मन पराउँछन्। र जब उनीहरूले थाहा पाएको र मनपर्ने गीतमा TikTok सेट देख्छन्, उनीहरूले यसलाई हेर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। थप रूपमा, लोकप्रिय गीतहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको TikToks लाई 'तपाईंको लागि' पृष्ठ एल्गोरिदममा ध्यान दिन मद्दत गर्न सक्छ।
4. अधिक मानिसहरूको अगाडि आफ्नो भिडियोहरू प्राप्त गर्न ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस्
जब तपाइँ सान्दर्भिक ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाइँका भिडियोहरू खोज परिणामहरूमा देखा पर्नेछ जब मानिसहरू तपाइँको जस्तै सामग्री खोजिरहेका छन्।
5. TikTok दृश्य बट प्रयोग गर्नुहोस्
दृश्य बट एक प्रोग्राम हो जसले स्वचालित रूपमा तपाइँको भिडियोहरूको लागि हेराइहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। तपाईंको सामग्रीमा थप आँखाहरू प्राप्त गर्ने यो द्रुत र सजिलो तरिका हो। यो भ्यू बट प्रोग्राम डाउनलोड गरेर वा टिकटक भ्यू बट सेवाको लागि भुक्तान गरेर गर्न सकिन्छ। दृश्य बट छनौट गर्दा विचार गर्न केहि चीजहरू छन्। भ्यू बट TikTok सँग उपयुक्त र प्रयोग गर्न सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। साथै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले दृश्य बटबाट धेरै हेराइहरू प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंको खाता प्रतिबन्धित हुन सक्छ।
6. अन्य TikTok प्रयोगकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्
यसले तपाईंलाई पूर्ण नयाँ दर्शकहरूमा पुग्न र तपाईंको भिडियोहरूमा थप हेराइहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईले TikTok को डुएट र च्यालेन्ज फिचरहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ थप भ्यूहरू प्राप्त गर्न।
7। प्रत्यक्ष जानुहोस्
यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि लाइभ भिडियोहरू TikTok मा सबैभन्दा धेरै हेरिएको सामग्री हो। प्रत्यक्ष भिडियोहरूले नियमित भिडियोहरू भन्दा 6-10 गुणा बढी हेराइहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्नो TikTok भिडियोहरूमा थप हेराइहरू प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, लाइभ हुनु भनेको जाने बाटो हो। तपाइँको लाइभ भिडियोहरु बाट धेरै भन्दा धेरै प्राप्त गर्न मद्दत गर्न यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
तपाइँको लाइभ भिडियो पहिले नै घोषणा गर्नुहोस् - तपाइँ लाइभ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाइँका अनुयायीहरूलाई थाहा दिनुहोस् ताकि उनीहरूले ट्युन इन गर्न सक्छन्। तपाइँ यो तपाइँको कथामा काउन्टडाउन पोस्ट गरेर वा पुश सूचना पठाएर गर्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाइँसँग 10,000+ फलोअरहरू छन् भने। )। एक साथी संग लाइभ जानुहोस्
नियमित रूपमा पोस्ट गर्नुहोस् - यदि तपाइँ लगातार नयाँ सामग्री राख्दै हुनुहुन्छ भने मानिसहरू थपको लागि फिर्ता आउनेछन्। तपाईं अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि आफ्नो भिडियो प्रचार गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग इन्स्टाग्राम वा ट्विटरमा धेरै फलोअरहरू छन् भने, थप हेराइहरू प्राप्त गर्नका लागि तिनीहरूसँग आफ्नो TikTok भिडियोहरू साझेदारी गर्नुहोस्। अन्तमा, तपाइँका दर्शकहरूसँग संलग्न हुनुहोस् र उनीहरूलाई तपाइँका भिडियोहरू साझेदारी गर्न प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
1000 TikTok भ्यूहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले आफ्नो लक्षित दर्शकहरूसँग कुरा गर्ने रोमाञ्चक र आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्नुपर्छ। एकचोटि तपाईंले केही उत्कृष्ट सामग्री बनाइसकेपछि, यसलाई तपाईंको सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा साझेदारी गर्न र अरूलाई पनि हेर्न र साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाइँ तपाइँको सामग्री को प्रचार गर्न को लागी केहि विज्ञापनहरु चलाउन को लागी विचार गर्न को लागी सोच्न सक्नुहुन्छ र धेरै मान्छेहरु लाई हेर्न को लागी।
रचनात्मक र मौलिक भिडियोहरू पोस्ट गर्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले फरक देखिने भिडियोहरू हेर्न र साझेदारी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सान्दर्भिक ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस् - यसले तपाइँको भिडियोहरू सामग्रीमा रुचि राख्ने प्रयोगकर्ताहरूद्वारा पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। र अन्तमा, अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् - अन्य व्यक्तिका भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्नुहोस् र मनपराउनुहोस्, र तपाईंले हेराइ र फलोअरहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
कुनै फलोअर बिना TikTok मा हेराइ प्राप्त गर्ने कुनै एकल जवाफ छैन। तपाइँ र तपाइँको खाता को लागी के काम को लागी पत्ता लगाउन को लागी तपाईले विभिन्न रणनीतिहरु संग प्रयोग गर्न आवश्यक छ। लोकप्रिय विधिहरूमा ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्ने, अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग सहकार्य गर्ने, र आकर्षक सामग्री पोस्ट गर्ने समावेश छ। याद गर्नुहोस् कि TikTok मा खाता बढाउन समय र स्थिरता लाग्छ, त्यसैले यदि तपाईंले तुरुन्तै परिणामहरू देख्नुभएन भने निराश नहुनुहोस्।
यदि तपाईंले TikTok मा भ्युहरू प्राप्त गरिरहनुभएको छैन भने, तपाईंले त्यसलाई परिवर्तन गर्न केही कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले, तपाईको खाता निजीमा सेट गरिएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। यदि यो हो भने, यसलाई सार्वजनिकमा स्विच गर्नुहोस्। अर्को, तपाईंले चाखलाग्दो र आकर्षक हुने गुणस्तरीय सामग्री पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। साथै, ह्यासट्यागहरू प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंको भिडियोहरूमा अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई थप एक्सपोजर प्राप्त गर्न ट्याग गर्नुहोस्। अन्तमा, अन्य प्रयोगकर्ताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ TikTok मा धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ केहि चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका भिडियोहरू आकर्षक छन्। संलग्न सामग्रीले मानिसहरूलाई तपाईंको भिडियोहरू हेर्न र साझेदारी गर्न पाउनेछ। थप हेराइहरू प्राप्त गर्न तपाईं अन्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि आफ्नो भिडियोहरू प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ द्रुत परिणामहरू चाहनुहुन्छ भने तपाइँ दृश्य बटहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, ह्यासट्यागहरू र ट्रेन्डिङ विषयहरू प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको भिडियोहरू धेरै मानिसहरूको अगाडि प्राप्त गर्न। तपाईंले यी सुझावहरू पछ्याएर आफ्नो TikTok भिडियोहरूमा छिटोभन्दा धेरै हेराइहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले जुनसुकै रणनीतिहरू प्रयास गर्नुभयो, रचनात्मक हुनुहोस् र तपाईंको सामग्रीसँग रमाईलो गर्नुहोस्।
टैग: टिक टक